သမိုင်းဝင် ရွှေဘုံသာမုနိ စေတီတော်မြတ်ကြီး ထီးတော်တင်လှူခြင်းနှင့် ပြည်မြို့ ဓမ္မဗိမာန်ပန္နက? - Yangon Media Group
သမိုင်းဝင် ရွှေဘုံသာမုနိ စေတီတော်မြတ်ကြီး ထီးတော်တင်လှူခြင်းနှင့် ပြည်မြို့ ဓမ္မဗိမာန်ပန္နက?
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရ ဦးအောင်ကို၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။ ကျိုက်ထီးဆောင်းအဘိုး ဆရာတော်ကြီး၏ ဆန္ဒတော်နှင့်အညီ ထီးတော်အဆူ (၅ဝ၁)ပြည့် စေတီအဖြစ် ပြည်မြို့တစ်ဖက်ကမ်း ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ သမိုင်းဝင်ရွှေဘုံသာမုနိ စေတီတော်အား ထီးတော်တင်လှူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဆရာတော်များ ပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များ၊ တိုင်းသံဃနာယကဆရာတော်များနှင့် ကျိုက်ထီးဆောင်းဆရာ တော် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက ဓဇဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တနာဂဒီပဆရာ တော်အားအမှူးထား၍ မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာ သာအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နယ်စပ်တောင် တန်းဒေသသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း (ဗဟို)မှ ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါက်တာ ခင်ရွှေနှင့် ကျိုက်ထီးဆောင်းငါး သုံးလီမိသားစု၊ ရွှေဘုံသာမုနိ ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် ပန်းတောင်းမြို့ နယ်မှ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ စုပေါင်းကာ ထီးတော်တင်လှူခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ထီးတော်တင်လှူပွဲ အခမ်းအနား အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်၊ (၁၃၇၉ ခုနှစ် တပေါင်းလပြည့် ကျော် ၂ ရက်) မတ် ၃ ရက် နံနက် ၈ နာရီတွင် ရွှေဘုံသာမုနိ စေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် ရဟန်းသာမဏေနှင့် သီလရှင်အပါး (၁၂ဝဝ)အား နံနက် ၈ နာရီတွင် သာသနာ့ဘောင်သို့သွတ်သွင်း ခြင်းနှင့် ညနေပိုင်းတွင် ထီးတော်၏ ပထမဘုံအဆင့်နှင့် ဒုတိယဘုံအဆင့်အားတင်လှူပူဇော်ခဲ့သည်။ ရွှေဘုံသာမုနိစေတီတော် မြတ်ကြီး ထီးတော်တင်လှူပူဇော်ပွဲတွင် မတ် ၃ ရက်နှင့် မတ် ၄ ရက် ညပိုင်းတို့၌ နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်များမှ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှ အကအလှများ၊ ပဒေသာအငြိမ့်ဇာတ်သဘင်တို့ ဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓ ဘာသာအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နယ်စပ် တောင်တန်းဒေသသာသနာနုဂ္ဂဟ အသင်း(ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌဝဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါက်တာခင်ရွှေ (ဇေကမ္ဘာ) မိသားစုမှ ကျပ်သိန်းတစ်ရာကို လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေစကြိုမြို့နယ်တွင် နေအိမ်မီးဖို မီးကြွင်းမီးကျန်မှ တစ်ဆင့် အကာသို့ ကူးစက်၍ မီးလောင်မှုဖြစ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့၌ မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား မိသားစုလေးဦး အသတ်ခံရမှုဖြစ်
ဂျပ်စတင်ဘီဘာ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်အတွက် ကာဘိုသို့ ရောက်ရှိ၊ ဆယ်လီနာလည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် ကာဘ??
သြဂုတ်လမှာ ရုံတင်တော့မယ့် ဂျောင်ဟယ်အင်းနဲ့ ကင်ဂိုအွန်းတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ပိုစတာ ထွက်ပေါ်လာ